मेयर्स कपमा सर्वाधिक धेरै रन बनाउने पाँच खेलाडी – onlinekhelkhabar.com
मेयर्स कपमा सर्वाधिक धेरै रन बनाउने पाँच खेलाडी
काठमाडौं (अनलाइन खेल खबर) । अहिले काठमाडौं मेयर्स कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता जारी रहेको छ । जस अन्तर्गत लिग चरणका सबै खेलहरु सकिएका छन् ।
जसबाट लिगका शीर्ष दुई टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ उपाधिका लागि प्रतिष्पर्दा गर्दैछन् । यी दुईबीचको फाइनल खेल शनिबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुनेछ ।
यस बीचमा हामी प्रतियोगिताको फाइनल अघि प्रतियोगितामा आफ्नो ब्याटमार्फत प्रभाव छोड्न सफल पाँच खेलाडीको बारेमा चर्चा गर्न गईरहेका छौं । जो सर्वाधिक रनकर्ता हुन् ।
५. सोमपाल कामी : पछिल्लो समय आफुलाई अलराउन्डरको रुपमा ढाल्दै गरेका सोमपाल कामीका लागि पनि यस मेयर्स कप प्रतियोगिता सुखद हुन् पुग्यो । त्रिभुवन आर्मीका महत्वपूर्ण खेलाडी समेत रहेका उनले मेयर्स कपमा ओपनिङ समेत गरेका थिए । टिम फाइनल पुग्न नसकेपनि सोमपालका लागि प्रतियोगिता सुखदनै भएको मान्नु पर्छ । लिग चरणबाट उनले ४ खेलबाट १ सय २० रन बनाए । जसमा एक अर्धशतक सामेल रहेको छ ।
उनले प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो खेलमा एपीएफविरुद्ध २८ रन बनाउँदा दोस्रो खेलमा काठमाडौ मेयर -११ विरुद्ध ८० रन बनाएका थिए । भने तेस्रो खेलमा पुलिसविरुद्ध सस्तैमा आउट हुन् पुगेका थिए । त्यस खेलमा उनले मात्र ५ रन बनाउँदा लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा बागमतीविरुद्ध ७ रन बनाएका थिए ।
४ . सन्दीप जोरा : एपीएफका युवा खेलाडी सन्दीप जोरा मेयर्स कपमा सर्वाधिक धेरै रन बनाउने खेलाडीको सूचीमा चौथों नम्बरमा रहेका छन् । लिग चरणका ४ खेलबाट उनले १ सय ४८ रन बनाए । प्रतियोगितामा भने उनको सुखद सुरुवात हुन् सकेको थिएन ।
पहिलो खेलमा उनि आर्मीविरुद्ध खाता खोल्न समेत रहेका थिएनन् । तर दोस्रो खेलमा उनले पुलिसविरुद्ध राम्रो ब्याटिङ प्रस्तुत गर्दै ६१ रनको योगदान टिमका लागि गरेका थिए । यस्तै तेस्रो खेलमा बागमतीसँग २५ र मेयर-११ विरुद्ध ६२ रनमा अविजित रहेका थिए ।
३. पारस खड्का : बागमती प्रदेशका महत्वपूर्ण खेलाडी पारस खड्का प्रतियोगिताको सर्वाधिक धेरै रन बनाउने खेलाडीको सूचीको तेस्रो नम्बरमा रहेका छन् । लिगका चार खेलबाट उनले १ सय ५८ रन बनाए । उनि सुरुवाती खेलमा भने चल्न सकेका थिएनन् ।
पहिलो खेलमा पुलिसविरुद्ध शून्यमा आउट भएका उनले क्रमशः पुलिसविरुद्ध १० रन र एपीएफविरुद्ध २९ रन जोडेका थिए । तर लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा उनले आर्मीविरुद्ध सानदार ब्याटिङ प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले शतकीय पारी खेलेका थिए । १ सय ३३ बलको सामना गरेका उनले ११ चौका र २ छ्क्कासहित १ सय १९ रन बनाएका थिए । जसले गर्दा बागमतीलाई १० रनले खेल जित्न प्रयाप्त समेत बन्यो ।
४. दिपेन्द्र सिंह एरी : नेपाल पुलिस क्लबमा महत्त्वपूर्ण सदस्य अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरीले मेयर्स कपमा ४ खेलबाट १ सय ६५ रन बनाए । पहिलो खेलमा बागमतीविरुद्ध खाता खोल्न नसकेका उनले दोस्रो खेलमा भने सानदार ब्याटिङ गर्दै एपीएफविरुद्ध १ सय ४० रन बनाए । यस्तै तेस्रो खेलमा आर्मीविरुद्ध १ रन बनाउँदा चौथोंमा मेयर-११ सँगको खेलमा २४ रन बनाएका थिए ।
५. विनोद भण्डारी : त्रिभुवन आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारी सर्वाधिक धेरै रन बनाउने खेलाडीको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । लिग चरणबाटै बाहिरिएको आर्मीबाट उनले ४ खेलबाट १ सय ८४ रन बनाए ।
उनले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा एपीएफविरुद्ध ४२ रन , दोस्रोमा मेयर -११ सँग २० रन र तेस्रोमा पुलिसविरुद्ध ३ रन बनाउँदा लिगको अन्तिम खेलमा बागमती प्रदेशविरुद्ध शतकीय पारी खेले । अर्कोतर्फ बागमतीका पारस खड्काले शतक बनाउँदा लक्ष्य पछ्याएको आर्मीका कप्तान भण्डारीले पनि १ सय १४ बलमा ८ चौका र ७ छ्क्कासहित १ सय १९ रन बनाएका थिए ।
Previous Postबागमतीले आर्मीलाई हरायो
Next Postपब्लिक युथ च्याम्पियन